Meejar Jenaraal Kinfee Daanyaw to'annoo jala oolanii Finfinnee dhufaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Daarektarri Olaanaa duraanii Korporeeshinii Sibiilaafi Injiinaringii (MeTEC) Meejar Janaraal Kinfee Daanyaw to'annaa jala oolan.
Erga to'annaa jala oolfamanii booda gara Finfinnee fidamuu isaanii miidiyaan biyya keessaa gabaasanii jiru.
Aanga'aan kun naannoo Tigiraay bakka Humaraa jedhamutti wayita to'annoo jala oolchan miidiyaan biyyaalessaa ETV'n kallattiin tamsaasee jira.
Hojii Korporeeshinichaa waliin walqabateen kan shakkaman Daarekteerichi gama Lixa Tigiraayitti kan argamtu Baataar bakka jedhamtutti tumsa hawwaasaafi humna ittisaatiin ture kan to'annaa jala oolan.
Guyyaa kaleessaa Abbaan Alangaa Mootummaa Federaalaa saamicha maallaqaa guddaatiin kan shakkaman gaggeessitoota ol aanoo MeTEC namoota 27 akkasumas ogeessota to'annoo jala oolfamuu ibsa kennee ture.
Akka Abbaan Alangaa Federaalaa Kaleessa jedhetti 'METEC' birrii biiliyoona 37 oliin dorgommii caalbaasii malee biyya alaatii bittaa raawwateera.
Bittaan biyya keessaas dhaabbilee hoogganoota 'METEC' waliin hidhata michummaa fi firummaa qaban irraa caal-baasii malee raawwatame jedhan Obbo Birhaanuun.
Awwaalli namoonni 200 ol itti awwaalaman daangaa Oromiyaafi Somaaleetti argame